BAKTEERIYADA CANAB: DAAWEYNTA CUDURKA IYO SABABAHA, CALAAMADAHA, SAWIRRADA IYO XAKAMAYNTA XAKAMAYNTA - BEERTA
Dhammaan wax ku saabsan bakteeriyada canabka: noocyada, calaamadaha, daaweynta
Sida muuqaal kasta oo dabiici ah oo dabiiciga ah, geedka canabka ah waxaa si joogto ah loogu geystaa gardarrada yaryar iyo macroorganizmahataas oo looga golleeyahay in ay ka foojignaato baahida jirta.
Kuwani waa fayruusyo iyo bakteeriya, fangaska caanaha, cayayaanka iyo shimbiraha. Kaliya qof ayaa awood u leh in uu ku caawiyo geedka shariifka ah si uu uga badbaado halganka noolaanshaha.
Maxaa shuruudo keena cudurka?
Khatarta khatarta ah ee canabka:
Xaaladaha adag kobcinta (ciidda la gooyey, abaarta, heerkulka hooseeya habeenkii iyo xilliga qaboobaha, roobab daba dheeraaday, dabayl xoog leh).
Agrofone yar (la'aanta waraabinta, bacariminta, xad-dhaafka ama la'aanta qaybaha raadinta ee ciidda, manjooyin aan joogto ahayn, jaridda dhirta, taageerada la'aanta, ku xadgudubka wakhtiga goosashada).
Cayayaanka cayayaanka, duurjoogta on xididada, caleemaha, caws iyo miraha geedka.
Qaab-cayaareedka noolaha, taas oo keenta caabuq fungal ah, taasoo horseedaysa hoos u dhigidda xoogga muhiimka ah ee warshadda iyo dhimashada.
Noocyada unicellular - bakteeriyada keenta cudurrada xubnaha qaybaha geedka canabka ah.
Jirrada unugyada unugyada aan-jirku ahayn - fayraska.
Miraha canab si fiican u kiciya nidaamka difaaca aadanaha, qofkuna habka xulashada wuxuu isku dayayaa in uu hagaajiyo difaacida dhirta noocyo kala duwan oo cuduro ah oo ka mid ah dhaqankan.
Bakteeriyadu waa kuwa ugu da'da weyn ee noolaha ee Dunida oo lagu yaqaanay nin kaliya qarnigii 19aad waxaana loo aqoonsaday inuu yahay waxyeelo iyo faa'iido. Wakiilkooda ku sugan bay'adu waa mid aan la qiyaasi karin. Muuqaalkoodu waa "muwaadin aduunka".
Bakteeriyadu waxay la socdaan calafka, caloosha, iyo dareeraha dareeraha, oo inta badan abuura ururo. Iyada oo la macaamilayo hawada waxay u kala saaraan aerobic iyo anaerobic.
Waxay leeyihiin dhowr nooc oo dhalmo ah: iyada oo loo qaybinayo ama habka galmada ee asalka ah. Waxaa intaa dheer, xawaare ka mid ah dhalmada iyo dejinta waa mid aad u sareysa in infakshanka bakteeriyada cudurku ku dhaco xaalad ah saacado.
Iyadoo ku xiran qaabka bakteeriyada, waxay dooranayaan habab gaar ah oo ku xirnaanta jidhka bixiyaha si ay u nuugaan nafaqooyinka.Haddii ay jiraan wax yar, iyaga oo isku dayaya in la kordhiyo aagga nafaqada, waxay abuurtaa koritaan cusub - kororka. Isku-dhafanaanta gumeysiga, ayaa kiimikooyinka ku jira sida biofilm ah ee saameynta aan la gaari karin ee daroogooyinka.
Waxyaabaha keena ee bakteeriyada ee canabku waa:
bakteeriyada - qoyska of saprophytic, tirinta in ka badan 100 noocyada; si fiican loo ilaaliyo ciidda, biyaha, dhirta;
pseudomonadaceae - sheybaarka moobiilka ee wareega, geedaha dhirta; wuxuu keenaa boogaha dhaadheer, taas oo keenaysa in la ogaado; meel kasta oo caan ah;
mycobacteriaceae - Biriijka-sida, branching ee dhirta dhalinyaro ah bini'aadamka, ku nool yihiin ciidda; iska caabiya alkolada iyo asiidhka.
Si loo horumariyo istaraatiijiyadda koontaroolka, cudurada canabka ah waxaa lagu aqoonsaday isticmaalka hababka:
serolojik (falanqaynta jawaabaha difaaca jirka ee difaaca jirka);
biochemical (falanqaynta dheef-shiid kiimikaadka bakteeriyada isticmaalaya tusmooyinka);
physiological (falanqaynta habka nafaqada iyo dheef-shiid kiimikaad);
Naasnuujiyeynta (falanqaynta gaarka ah ee xulashada bixiyaha);
Muuqaalka (falanqaynta qaabka iyo qaabka unugyada bakteeriyada).
Faddarada bakteeriyada sida tan:
Calaamad muujin ah oo ku saabsan faddarada bakteeriyada ee warshad waa midabka caleemaha gaarka ah, cawska, cawska iyo caws. Albaabbada infekshanku waa dhuumo farsamo ah oo ah caleen ama dufan bakeer ah, iyo sidoo kale waxyeelo ay keenaan cayayaanka.
Calaamadaha dhaawacyada, noocyada iyo xakamaynta xakamaynta
Necrosis bakteeriyada ah (Bakteeriyadu waxay leedahay, cudurka Oleiron) - cudur ka mid ah qaybta dhulka ee baadiyaha. Cudurka ayaa laga yaabaa, ka dib markii muddo dheer qarsoodi ah ee waxqabadka muhiimka ah ee bakteeriya, ayaa isu muujinaysa sida dillaaca ay keentay miraha hore ee guga.
muuqaalka muuqaalka muraayada madow ee lagu riixo jidhka xaashida, oo leh xuduud cad oo caan ah;
beddelida ubaxyada ubaxyada caadiga ah iyo madow;
dareen la'aanta burooyinka hoose ee bilowga xilli sii kordhaya, kuwa sare waxay caleemo yaryar siinayaan calaamadaha chlorosis (hurdi);
niyadjab ku jira noodhka (oo ka dhalatay niyad jab) ee caleemaha dhalinyarada;
lagu daaweynayo 5% xalinta Bordeaux ama daawada sulfur ee calaamadaha ugu horreeya ee caabuqa;
daaweyn soo noqnoqon leh xal isku mid ah, laakiin 2% diiradda, ka dib muuqaalka caleemaha;
duurka oo rajo la'aan ah ayaa lagu talinayaa in la raro.
Necrosis waxaa sababi kara maqnaanshaha potassium iyo magnesium ee carrada, dhaxan, iyo soo dhaweynta sigaarka sunta. Xaaladdan oo kale, necrosis waxaa loo tixgeliyaa sidii laysku qaadsiin lahaa, iyo tirtiriddu waxay bixin kartaa isbeddel ku yimaada tarjumaanka.
Bakteeriyada Berry waa cudur ka mid ah miraha laga bilaabo muddada ugu horeysa ee ay sameysmaan (sharafnimada maqaarka maaha mid muhiim ah).
Caabuqa ee berry wuxuu u dhacaa si xushmad leh, iyada oo aan saamaynayn burushka oo dhan, marxaladda korriinshaha infekshanka cusub ma ahan wax khatar ah. Khatarta khatarta leh cimilada kulul, ugu horeyntii miraha miraha ka soo baxa dhinaca qorraxda ee baadiyaha.
muuqaalka muuqaalka maqaarka ee maqaarka adag oo adag oo ah calaamad yar oo cad jaalaha ah;
isbeddelka booska ee qoto dheer ee madow-guduud ah guduud, ku fidiyey dhererka of berry;
qalajinta degdega ah ee unugyada berry, oo ah saxarka la sameeyay;
Marka uu cudurku galo marxalad cusub, berry wuxuu dhuuqaa 5-7 maalmood.
ilaalinta miraha ka soo baxa qoraxda iyo dhaawaca farsamada;
xakamaynta cayayaanka ee isku-dhafka ah, waxyeeleynaya sharafta midhaha;
Kiimikooyinka ka hortagi kara bakteeriyada Bacillus viticola Burgv ayaan weli la horumarin.
Cudurka Pierce waa infakshanka bakteeriyada ee duurka pathogenic pathogenic, taas oo caan ku ah beeraha canabka ah ee Waqooyiga Ameerika iyo koonfur-bari ee Europe. Carriers waa ceegadas.
Mabda'a guuldarada: Heshiiska maraakiibta qoryaha, natiijo ahaan - dhirbaaxada dhirta ee dhirta leh. Biyo-tijaabooyinka udub-dhexaadka ah ee loo yaqaanno pathogen waa in ka badan 100 nooc, oo ay ku jiraan geedo duurjoog ah, xoortay, iyo geedo yaryar.
isbeddel xagaaga ah sababtoo ah qalajinta saxanka caleenka ah ee geesaha ilaa weelka dhexe;
internodes gaaban on caleemaha yar yar;
Xooga aad u hooseeya ee koritaanka caleemaha;
dhibco muuqan on caleemaha (iftiin ama huruud, cimilada qabow - madow);
dhoobada shanlooyinka ah, ubaxyada iyo ugxansidaha ayaa dhacaya;
noloshii geedka canjeeray cudurku waa ugu badnaan 3 sano.
xulashada taxaddar ah ee wax beerto ee wakhtiga la qabsan lahaa beerta canabka ah;
inuu dib u dhigo horumarinta cudurka lix bilood ah: daaweynaya geedka canabka ah (2dii usbuucba mar) oo leh xalka oxytetracycline ee ku shaqeeya bakteeriyanatically (xayawaanka geedi-socodka dhalidda bakteeriyada);
iyadoo kordhinaysa diirada daroogada laga soo bilaabo 50 ppm ilaa 500, waxaad kordhin kartaa nolosha geedka ilaa 2 sano.
Cudurka bakteeriyadu wuxuu ka duwan yahay dhaawac oidium ah taas oo u dhiganta qaybta sare ee caleen, bacteriosis waxay u gudubtaa qoto dheer qaybta ay saameeysay geedka.
Kansarka kansarka - waa urur isdaba-joog ah oo la abuuro qaabab istiraatiiji ah, oo si dhakhso ah u koraaya geedcanab. Tani waa unugyo dib-u-dhis ah oo DNA-da ay bedesho bakteeriyada jiran.
Wareegga keena cudurka - Agrobacterum vitis wuxuu ku dhex mari karaa jirka dhirta muddo dheer, oo ka soo baxaya dhulka hoyga xilliga qaboobaha, ama haddii ay dhacdo xaalado aan caadi ahayn: daciifin xoog leh oo dhirta, sababtoo ah dhaawaca dabka, dhaawaca farsamada ama kharajka cayayaanka.
Sababta daciifinta difaaca waa:
jiilaalka qaboobaha oo si dhib yar u wareejiyay warshad;
nitrogen-ka xad dhaafka ah ee ciidda, sababtoo ah quudinta aan wax qorin;
Muraayad cillad ah sida calaamad muujinaysa qarsoodi gaar ah oo ku saabsan wixii dhacay. Bakteeriyadu waxay qaadataa calaamaddaan, si firfircoon u ururinta aagga ay dhibaatadu saameysey. Calaamadaha waxyeelladu waa kuwo sahlan ama u muuqda mudaharaad, inta badan xilliyada xilliga qallalan:
hoos u dhaca heerarka kobaca sababo aan muuqaal lahayn;
muuqaalka kore ee caleemaha qallalan qallalan;
xumaanta muuqaalka iyo dhadhanka midhaha;
luminta xididka by geedo;
nooca faaqidaad ee geedo.
Cudurku wuxuu u muuqdaa mid u muuqda dhammaadka xagaaga marka geedka canabka ah ee u muuqda on geedka canabka ah dilka ah (dhowaan la arkay sanadlaha) of mawjadaha dhaqso koraya: marka hore leh cabirka bean, ka dibna leh tufaax waaweyn iyo ka badan. Burooyinka ayaa ku koraaya unugyada, taas oo ka dhimi karta dhirta nafaqooyinka, taas oo yaraynaysa koritaankeeda, fruiting, daaqa miraha. Muuqaalka dhirtu waxay u socotaa koritaanka buro, baadiyaha way engegi kartaa oo dhimataa.
"Phytoplasmin" waxay siin kartaa hagaajin ku meel gaar ah, "Fitolavin" - oo ah kakooban antibiyootiko. Ma jiraan wax kiimiko ah oo ilaalin iyo daaweynaya geedka canabka ah ee ka yimaada faddarada bakteeriyada. Kahortagga kaliya. Oo, sida macquul ah - raskorchevka.
Maaddaama ay dhirta waxyeelladu ay halis weyn ugu jirto infekshanka, waa lagama maarmaan in la fuliyo dhammaan tallaabooyinka agrotechnik si taxaddar leh, isku dayaya in la ilaaliyo sharafta dusha sare ee geedka canabka ah iyo faytansan la'aanta.
Ha ku beeranin warshad cusub si ay meesha uga saarto meydka meydka bakteeriyada (bakteeriyadu waxaa lagu kaydiyaa dhulka oo waxay sugayaan milkiile cusub). Warshad hufan si ay u gubto.
Ha beeran maaddooyinka beeraha laga soo saaro baadiyaha saameeya.
Helitaanka qalabka beeraha si ay u fuliyaan guryaha xanaanada gaarka ah ee la baaro, marka laga reebo infekshanka bakteeriyada.
Ka hor intaan la beeri, ku dar burooyinka ilaa 40 daqiiqadood oo kuleyl (53 ° C) biyo ama saliid qaydhin leh aasaas.
Gooyn ka hor intaan la beerto si loo sameeyo thermotherapy 30 saacadood biyo kulul (35 ° C).
Kajirinta baadiyaha si ay u sameeyaan doomaha tayada leh, jeermiga isaga oo leh aalkol ama naxaas sulfate ka hor intaadan u guurin warshad kale.
Iska yaree qaybta dhaawacan ee baadiyaha ah, sawir laga jaray si loo xakameeyo 2% xal of copper sulfate iyo garoonka beerta.
Diyaarinta baadiyaha ee jiilaalka si ay u fuliyaan tallaabooyin jahwareer ah, ilaalinta sharafta daboolka iyo ka reebista xiriir toos ah ee geedka canabka ah ee dhulka. Daawee nitrafen.
Iyada oo loo raadinayo beergooyska, ha ka badinin dhirta, si aanay u dhaafin jiilaalka daciifay ama dhaawacmay.
Si joogto ah looga hortago cudurada fungal kaas oo wiiqa nidaamka difaaca ee canab.
Waa in la xusuustaa in laga saaro xididdada soo bixitaanka ee guga (katarovka) - dariiqa looga hortago kansarka bakteeriyada.
Canabtu ma jecesho ciidda biyaha leh, waraabinta xad dhaafka ah - khatarta cudurka.
Canabku ma leeyahay difaac jirka bakteeriya.
Heerka dhaawaca kansarka canabka waxaa lagu go'aamiyay warshadaha laga soo qaaday 3 dhibcood:
liidata ee ka jawaab celinta jirrada pathogen - 1 dhibic;
isagoo xasilloon celcelis ahaan - 2 dhibcood;
ugu nugul ee cudurku - 3 dhibcood.
Kooxda koowaad inta badan waxay ka koobanyihiin iskudhafka iyo isdhexgalka, sida:
Anapa goor hore;
Kor u qaadidda;
Dhalinyarada iyo kuwa kale
Waxay tixgelin doonaan noocyada ugu nugul:
Magaracha Ilmaha dhashay;
Raaxo iyo kuwa kale.
Meelaha miro miiska waxaa hagaagaya, geedo kuwaas oo laga helay xaaladaha nadiif ah ee shaybaarka, xilliga beerto waxay caymis ku yihiin infekshannada bakteeriyada ("Augustine"). Laakiin, guud ahaan, canabku waxay si buuxda u adkeeyeen ballaarinta bakteeriyada, gaar ahaan, kansarka - ma taagna.